WARBIXIN: Saddex Xiddig Oo Sevilla Ah Oo Ay Tahay In Ay Man United Isha Ku Hayso Kuwaas Oo Khatar Ku Abuuri Kara Kulanka Caawa – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Spain, Wararka Maanta WARBIXIN: Saddex Xiddig Oo Sevilla Ah Oo Ay Tahay In Ay Man United Isha Ku Hayso Kuwaas Oo Khatar Ku Abuuri Kara Kulanka Caawa
Kooxda Manchester United ayaa wajihi doonta Kooxda Sevilla kulan ka tirsan lugta 1-aad ee wareega 16ka tartanka Champions League caawa.
Qaab ciyaareedka United ayaa ahaa mid aad u xun iyaga oo guuldarooyin kala kulamay kooxaha Newcastle iyo Tottenham, lakiin waxa ay heleen rajo kalsooni ah Sabtidii, iyagoo 2-0 uga badiyay Huddersfield kulankii FA Cup.
Kooxda ay caawa kula ciyaarayaan garoonka Ramón Sánchez Pizjuán Stadium waa koox kulamo isku jir ah la soo ciyaartay kooxaha ka dhisan horyaalka premier league.
Tan iyo markii ay shaqada ka cayrisay tababare Eduardo Berizzo waxa ay tababare cusub u magacawoday tababaraha reer Italy ee Vincenzo Montella kaas oo ku dhibaatoonaya in uu fikradiisa u gudbiyo xiddigaha kooxda.
Waxa ay ku jirtay qaab ciyaareed xun iyada oo laba bar-baro iyo guuldaro weyn oo 5/0 ah la kulmay kulamadii ugu dambeeyay ee horyaalka La Liga.
Si kasta ha ahaatee waxa ay dib u heleen qaab ciyaareedkoodii kulamadii ugu dambeeyay iyaga oo guulo gaaray 3-dii kulan ee ugu dambaysay.
Hadaba waxa aan halkan ku soo gudbin doonaa 3 xiddig oo ay tahay in ay Man United isha ku hayso kulankooda caawa ahna xiddigaha khatarta ku keeni kara.
28 jirkaan reer Argentine, oo si qarsoodi ah u ciyaaray labo kulan oo Italy ah ayaa ka faa,iidaystay xiriirka uu la leeyahay Tababraha reer Italy ee Montella kaas oo si joogto ah isaga garab ciyaarsiiya isaga xiddigaha Pablo Sarabia iyo Joaquin Correa oo ka danbeeya Luis Muriel.
Taas ayaa ka caawisay in ay is fahmaan sameeyaan horumar 3-dii kulan ee ugu dambeeyay marka loo eego is badalkii uu tababarihii hore ku samayn jiray shaxdiisa bilowgii xilli ciyaareedkan.
Waa xiddig ku xoogan kubada cirka waxana uu sidoo kale ku fiican yahay ka dhex bixinta kubada daafacyada waxa uu sidoo kale leeyahay gool dhalin cajiib ah.
Ciyaaryahankii hore ee Blackburn Rovers iyo Stoke ayaa xubin muhiim ah ka noqday kooxda Sevilla iyo waliba qorshaha tababare Montella.
Waxa uu ku bilowday dhamaan kulamadii sevilla ee 2018 isaga oo ciyaaray 12 kulan isaga oo isticmaalaya awoodiisa dhererka iyo waliba awooda uu ku leeyahay kubada cirka.
Kubad dilidiisa aya sidoo kale ah mid cajiib ah halka baaskiisu kor u dhaafay 80% kualamdii ugu dambeeyay.
29 jirka reer France ayaa United ku noqon doona dilaa isaga oo dhexda u gali doona kubado kasta oo weerarka ah waana xiddig ku dheereeya kubada rogaal celiska ah.
27 jirka reer France ee weerarka ka ciyaara ayaa ah xiddiga ugu khatarsan ee weerarka kooxda Sevilla ee champions league isaga oo dhaliyay 6 gool 6-dii kulan ee uu ciyaaray oo ay ka mid yihiin 3 gool oo uu ka dhaliyay Liverpool iyo saddexley uu ka dhaliyay kooxda Maribor.
Laakiin taas ayaan la macno ahayn in uu si toos ah ugu bilaaban doono kulanka caawa ay la ciyaari doonaan Red Devils.
Taas ayaa la macno ah in uu Motella ku bilaabi karo weeraryahanka Luis Muriel kaas oo uu horay ugala soo shaqeeyay Sampdoria isaga iyo xiddiga qaab ciyaareedka fiican ku jira ee Joaquin Correa.
Hadaba labada xiddig mid kasta oo lagu bilaabo waa xiddigo ay Man United tahay in ay si fiican u ilaaliyaan inkasta oo ay United xaalad difaac xumo ku jirto kulamadii ugu dambeeyay.
Ugu dambayn saddexda xiddig ee aan kor ku soo xusnay ayaa noqon kara xiddigaha halista ku noqon kara United laakiin waxa jira xiddigo kale oo la ciyaarayay oo ay tahay in ay dhamaantood isha ku hayaan kooxda oo dhan.